नेपाल आज | सावधान ! फोनबाट डिलिट गरिएका सामग्री यसरी हेर्न मिल्छ, तपाईको अन्तरङ्ग पल दुश्मनको हात पर्ला
सावधान ! फोनबाट डिलिट गरिएका सामग्री यसरी हेर्न मिल्छ, तपाईको अन्तरङ्ग पल दुश्मनको हात पर्ला
एजेसी । कसैलाई पठाएको कुनै इमेल सन्देश, एसएमएस वा कुनै अन्तरङ्ग तस्वीर तपाईका लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्दछ । किनभने फोनबाट यसलाई सधैंका लागि डिलिट गरिएपछि पनि वास्तवमा यो फोनमै लुकेर बसेको हुन्छ र कुनै पनि बेला तपाईको दुश्मनको हात लाग्न सक्दछ ।
एन्ड्रोयड सफ्टवेयरको गडबडी
यद्यपि केहीले यसलाई आभास्टको पब्लिसिटी स्टन्ट पनि मानिरहेका छन्, ताकि मानिसहरुमा आफ्नो फोन सुरक्षित राख्नका लागि आभास्ट सफ्टवेयर किन्न थालुन् । वास्तविकता जेसुकै होस तर जरुरी छ कि इन्टरनेटको यो क्रममा आफ्नो सुरक्षा स्वयमले गरियोस् र कुनै पनि हानीबाट बच्नका लागि आफ्नो फोन सोचविचार गरेर मात्र प्रयोग गरियोस ।